राउटे समुदायमा वैवाहिक समस्या ! – Everest Dainik – News from Nepal
राउटे समुदायमा वैवाहिक समस्या !
दैलेख, भदौ २ । ओखलमा धान कुट्न व्यस्त राउटे युवा प्रकाशले एकैपटक जुम्ल्याहा सन्तान जन्माए । चार दिनकी सुत्केरीका लागि पोषिलो खानेकुरा धानको भात नै हुने भन्दै उनी धान कुट्नमै व्यस्त देखिन्छन् ।
आफूलाई जङ्गलको राजा ठान्ने उनीहरूमा केही परिवर्तनका सङ्केत देखिन थालेको छ । खोला नजिक बस्ने कुवा वा खोलाको पानी सजिलै प्रयोग गर्ने यो समुदायलाई अहिले शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थापन गरिदिएपछि पाइपमा आएको पानी पिउन थालेका छन् । सरसफाइ गर्नुुपर्दछ भन्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको छ ।
जडिबुटीकै भर पर्ने यो समुदाय अहिले औषधि सेवन गर्न र घाउचोट लागेको ठाउँमा औषधि गर्न पनि तत्पर छन् । सबै समान खरिद गरेर बिक्री केन्द्र स्थापना गरिदिएपछि समुदायले निर्माण गर्ने कोशी, मदुस र अन्य सामान बेच्न बजार धाउनुपर्ने समस्या पनि अहिले समाधान भएको छ । उक्त गाउँपालिका र स्थानीय सामाजिक सेवा केन्द्रबाट परिवर्तनका लागि पहल थालिएको छ ।
ट्याग्स: dailekh, Raute Community